Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Maoritania
Tahiry isam-bolana Avrily 2015 1 Lahatsoratra Marsa 2015 1 Lahatsoratra Jona 2014 1 Lahatsoratra Mey 2014 1 Lahatsoratra Avrily 2014 1 Lahatsoratra Janoary 2013 2 Lahatsoratra
Desambra 2012 1 Lahatsoratra Novambra 2012 5 Lahatsoratra
Febroary 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2011 1 Lahatsoratra Febroary 2011 1 Lahatsoratra Oktobra 2010 1 Lahatsoratra Jona 2010 1 Lahatsoratra Desambra 2009 1 Lahatsoratra Septambra 2009 2 Lahatsoratra
Aogositra 2009 1 Lahatsoratra Jolay 2009 1 Lahatsoratra Desambra 2008 1 Lahatsoratra Novambra 2007 1 Lahatsoratra Septambra 2007 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Maoritania	E-boky GV Vaovao: Feom-Panantenana sy Fiovàna Afrikana "Feom-panantenana sy fiovana Afrikana" mampanakaiky anao kokoa amin'ireo tantara sy vahoakan'i Afrika atsimon'i Sahara, amin'ny alalan'ireo lahatsoratra tsara indrindra amin'ny teny anglisy nandritra ny taona 2012 - kadoa lavorary entina hiarahabana ny taona vaovao.
Maoritania: Avadiky ny Mpampianatra Korano ho Mpangataka ny Ankizy Madinika Hahita ankizy fantatra amin'ny hoe Al Mudat ianao eo amin'ny salan-taona 4 - hatramin'ny 14 taona, mangata-bola, ianao manerana ny renivohitra Maoritaniana Nouakchott. Tsy mangataka vola hoan'ny tenany ireo ankizy ireo - ny mifanohitra amin'izany aza, ilain'izy ireo ilay vola hanaramàna ny mpampianatra Korano.
13 Avrily 2014 Mahomby Ve Ny Fanasaziana Ara-Toekarena ? Mpanoratra Rakotomalala · Frantsa 02 Janoary 2013 E-boky GV Vaovao: Feom-Panantenana sy Fiovàna Afrikana Mpanoratra Bernardo Parrella · Angola 20 Novambra 2012 Maoritania: Avadiky ny Mpampianatra Korano ho Mpangataka ny Ankizy Madinika Mpanoratra أحمد جدو · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Tantara Malaza Indrindra Manerantany 3 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
Tantara mikasika ny Maoritania 22 Avrily 2015
Resabe Taorian'ny Fandresen'ilay Sarimihetsika Timbuktu Mpanoratra Abdoulaye Bah · Eoropa Andrefana Niteraka adihevitra marobe taty amin'ny tanibe afrikana ilay sarimihetsika Timbuktu. Ny sasany tia, ny kiana sasany miezaka manazava io fahombiazana io amin'ny fisian'ny dindo avy any ivelany
Mahery Fo Voasambotra Fa Niampanga “Fanandevozana An-tanindrazana” Tao Maoritania Mpanoratra Abdoulaye Bah · Fahalalahàna miteny M. Biram Dah Abeid ary olona valo hafa mpiaro ny zon'olombelona no voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny 11 novambra.
Mpikatroka Roa Nosamborina Nandritra Ny Famoretana Fihetsiketsehana Tao Alzeria Mpanoratra Abdou Semmar · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Tanora mpikatroka teratany Alzeriana i Mohand Kadi ary teratany Toniziana kosa i Moez Benncir. Nosamborina izy ireo raha niara-nisotro kafe teny amin'ny terasy tao afovoan-tanànan'ny renivotr'i Alzeria nandritra ny fihetsiketseham-panoherana milamina «Barakat !» andro iray alohan'ny fifidianana filoham-pirenena.
Maoritania: Manao Diabe 700km Mitaky Ny Rariny Ireo Mpiasa Mpanoratra أحمد جدو · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Tamin'ny Asabotsy 5 Janoary [ar], nanomboka nanao diabe lavitr'ezaka niainga tao an-tanànan'i Zouerat hihazo ny renivohitra Maoritania, Nouakchott ireo vondrona mpiasa tsy ara-dalàna na “Journalia” (mpiasa vonjimaika na isan-tonontaona). Raha ny fitambarany, diabe mirefy 700km no hovitain'ireo mpiasa mba hanoherana ny tsy rariny mihatra amin'izy ireo sy ny famitahana ataon'ny filoha Mohamed Ould...
Maoritania: Fahatsiarovana Ny Famonoana Ny Miaramila Mainty tao Inal Mpanoratra أحمد جدو · Fahalalahàna miteny Tokony ho androm-pifaliana ho an'ny Maoritaniana ny andron'ny 28 Novambra satria io no manamarika ny fahaleovantenany nisintaka tamin'i Frantsa. Saingy, mampitamberina tsiaro mampalahelo nandatsahan-drà [en] ihany koa io andro io rehefa mampahatsiahy azy ireo fa tamin'io andro io tamin'ny taona 1990, dia nisy fanadiovana ara-poko natao tao anatin'ny tafika maoritaniana.
Maoritania: Hetsika 25 Febroary Mitsipaka ny [Fibaikoana] Fanaraha-mason'i Frantsa Mpanoratra Rakotomalala · Frantsa Mandalo vanim-potoana ara-politika tsy ahatsinjovana ny ho avy i Maoritania hatramin'ny nandefasana ny filoha Mohamed Ould Abdel Aziz hotsaboina any Paris rehefa naratran'ny tifi-bala izy tamin'ny 13 oktobra 2012. Mifandamina ny ao Maoritania mandra-piveriny saingy maro ny Maoritaniana no manontany tena amin'ny anjara andraikitr'i Frantsa amin'ny toe-draharaha ankehitriny. Fihetsika nisabakabaka nataon'i Frantsa tamin'ny 2008...
Mpampianatra Maoritaniana Manao Amboletra Ny Biraon'ny Minisitry Ny Fanabezana Mpanoratra أحمد جدو · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Andianà mpampianatra avy amin'ny ambaratonga faharoa no nanao amboletra niditra tao amin'ny biraon'ny Minisitry ny Fampianarana ho fanoherany ny famindràna tsy amin'antony mpampianatra 120 ho any aminà sekoly hafa taorian'ny nandraisany anjara tamin'ny fitokonana tamin'ny taona lasa. Tatitra feno avy amin'i Ahmed Jeddou
Herinandro Fitorahana Bilaogy Ao Maoritania Hanoherana Ny Fitrandrahana Harena An-kibon'ny Tany Ataon'ny Vahiny Mpanoratra أحمد جدو · Fanoherana Nanao hetsika fanentanana mitondra ny lohateny hoe "Fanoherana ny fitrandrahan’ireo orinasa vahiny ny harena an-kibon’ny tany" ny mpitoraka bilaogy Maoritaniana nandritry ny herinandro. Mizara amintsika ny lahatsoratra tanaty bilaogy sy ireo bitsika avy amin'io fanentanana io, izay mikendry ny anehoana ny voka-dratsy aterak'ireo orinasa ireo eo amin'ny sehatry ny toe-karena,... 11 Novambra 2012
Inona Ny Anjara Asan'ny Tafika Eto Afrika ? Mpanoratra Rakotomalala · Cote d'Ivoire Matetika ny Tafika no nitana anjara toerana nampiova zavatra saingy manalasala teo amin'ny fiainana politika teto Afrika. tanelanelan'ny taona 1950 sy 2000, 53 ny firenena afrikana nizaka fanonganam-panjakana 85 izay tonga tamin'ny fiovan'ny fitondrana. Taorian'ny fiatoana kely nandritra ny taompolo 90, mbola fanta-daza tamin'ny fisiana fanonganam-panjakana be indrindra nandritra ny taompolon'ny taona 2000...